The Ab Presents Nepal » कार्यदलले जस्तो प्रतिवेदन बनाए पनि एमसीसी संसदबाट पारित हुन्छ – डा. भट्टराई
कार्यदलले जस्तो प्रतिवेदन बनाए पनि एमसीसी संसदबाट पारित हुन्छ – डा. भट्टराई
काठमाण्डौ -: प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहाकार डा. राजन भट्टराईले एमसीसी संसदबाट यसै हप्ता पारित हुने दावी गरेका छन् ।प्राइम टाइम्स टिभीको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै डा. भट्टराईले विवादित एमसीसी पारित हुने बताएका हुन् । सत्तारुढ दल नेकपाले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन जस्तो आए पनि पारित हुने भट्टराईको दावी छ ।
एमसीसीको विरोध गरेका कार्यदल संयोजक झलनाथ खनाल र संदस्य भीम रावलले पहिला समर्थन गरे पनि अहिले विरोध गरेको भट्टराईको जिकिर छ ।खनाल र रावलकै सहमतिमा सरकारले एमसीसी अगाडि बढाएको उनको भनाई छ । फरक प्रसंगमा उनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा छिटै आउँने बताए । मोदीसँग इन्ट्रि परमिटको बारेमा फेरी छलफल हुने पनि भट्टराईले बताएका छन् ।
भारतीय अध्यागमनले ‘नेपालका स्थलमार्गबाट दिल्ली पुग्ने नेपाली यात्रुले विमानबाट काठमाडौं फर्कन नपाउने’ नियम अनिवार्य गरेको छ । दिल्लीबाट नेपाल हवाइमार्गमार्फत यात्रा गर्दा ‘इन्ट्री परमिट’ अनिवार्य गरिएको हो ।नेपालका स्थलमार्गबाट दिल्ली पुग्ने नेपाली यात्रुले दिल्लीबाट हवाइ यात्रामार्फत काठमाडौं फर्कदा राहदानी अनिवार्य गरिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको औपचारिक आग्रहपछि भारतीय अध्यागमनले यो नियम ल्याएको हो ।
तर भारतीय नागरिकलाई भने यो नियम लगाइएको छैन । अर्थात सडक यात्राबाट नेपाल आएका भारतीयहरु हवाईमार्ग हुँदै स्वदेश फर्कन चाहेका इन्ट्रि परमिट आवश्यक पर्दैन । यसरी नेपाली नागरिक केन्द्रित गरी नियम ल्याइएको भन्दै विज्ञहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।